बर्खास्तमा परेका एसपी बिष्ट भन्छन्, सबै आरोप मसँग असम्बन्धित छ
गोपाल बराइली कार्तिक ११, 2075
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिलाई तरंगित बनाउने एउटा घटना थियो, त्यो कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या प्रकरण । यसले हरेक नेपालीको मन छोयो । स्वतस्फुर्त आन्दोलन पनि भए । र, कतै प्रायोजित पनि ।
तर, यही घटनाले सरकार र प्रहरी प्रशाषनलाई हल्लाई दियो । आखिर यत्तिका दिन भइसक्दा पनि किन अपराधी पक्राउ पर्दैनन् त ? के साच्चै अब निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न भएका मुख्य अपराधीले उन्मुक्ति पाउला त ? प्रश्न अनेक छन् ।
यही प्रश्नै प्रश्नका बीचमा बिहीबार नेपाल प्रहरीका तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्ट र वडा प्रहरी कार्यालयका इन्चार्ज जगदीश भट्ट बर्खास्तमा परे । सरकारले त्यसलाई नै प्रमुख उपलब्धि मानिरहेको छ । तथापी सरकारको त्यो कार्यको चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ ।
खासगरी सो घटनामा १४ वटा कारण देखाउँदै विष्ट र भट्टराई बर्खास्त गरिएको छ । निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या काण्डको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा चरम लापरबाही गरेको, पीडितका आफन्त र सरोकारवालाबाट प्राप्त गुनासोको उचित सम्बोधन गर्न नसकेको, प्रमाण लोप गरेको, घटनामा सम्बन्धित जिल्ला प्रमुखले सन्दिग्ध भूमिका खेलेको, स्थलगत अध्ययन गर्दा चरम लापरबाही गरेको आरोप छ ।
त्यसैगरी गैर व्यवसायिक र गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार गरेको, अनुसन्धानका सामान्य कानुनी व्यवस्था समेत पालन नगरेको, तत्काल प्रहरीबाट अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने खोजतलास तथा अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको, बलात्कार र हत्या घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण लाग्न सक्ने वस्तु र भित्री वस्त्र पानीमा चोपलेको, गुप्ताङग र तिघ्रा पखालेको आरोप छ ।
तत्काल नेपालमै नरहेका मृतकका बाबुको दस्तखत गराइएको, मृतकको शव अन्त्यष्टी गर्न पीडित परिवारलाई अनावश्यक प्रभाव, दबाब र धम्की दिएको, सुरक्षा कारबाहीका सिलसिलामा ‘Gradual Response and use of minimum force’ कम बल प्रयोग गर्ने सिद्धान्त नअपनाएको, प्रहरीको व्यवहार र कार्यशैलीका कारण आम नागरिक तथा पीडित परिवारका सदस्य विश्वस्त हुन नसकेको आरोपमा उनीहरुलाई बर्खास्त गरियो ।
तर, बर्खास्तमा परेका एसपी विष्टले भने आफुमाथि लागेका कुनै आरोप आफुसँग असम्बन्धित रहेको टिप्पणी गरेका छन् । निशान न्युजसँग कुरा गर्दै बर्खास्तमा परेका एसपी विष्टले भने, ‘म माथि लगाइएका कुनै पनि आरोप मसँग सम्बन्धित छैनन् ।
उनले आफु जिल्ला प्रहरी प्रमुख भए पनि निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनास्थलमा अपराध अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरु सहभागी भएको र उनीहरुकै रिपोर्टका आधारमा आफुले सबै कुरा बोलेको बताए ।
आफुमाथि गृह मन्त्रालय र आफ्नै प्रहरी संगठनबाट ठूलो घात भएको बताउँछन् । उनले गृहमन्त्रालयले सोधेको स्पष्टिकरणमा पनि आरोप लागेजस्तो कुनै पनि घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको लिखित स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
के होला उनको भविश्य ?
हुनलाई विष्ट र भट्टलाई बर्खास्त गर्दा भविश्यमा कुनै पनि सरकारी सेवामा काम गर्न अयोग्य भनिएको छैन । यसले गर्दा उनी भोली पनि फेरि प्रहरी संगठनमै फर्किएर आउने सम्भावना छ ।
उनले आफु निलम्बनमा परेदेखि नै अनाहकमा आफुलाई अन्यायमा पारेको बताउँदै आएका थिए । अहिले बर्खास्तमा परेपछि त उनी निक्कै निरास छन् र आक्रोसित पनि । अब आफु चुप लागेर नबस्ने उनी बताउँछन् ।
हुन त उनले बुझाएको स्पष्टीकरणमा पनि आफु राजनीतिक कोपभाजनमा परेको उल्लेख गरेका छन् । सरकारले सोधेको एक पेज प्रश्नको जवाफमा झण्डै १० पेज लामो स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
अझैं पनि उनलाई सर्वाेच्चको ढोका ढकढक्याउने बाटो खुल्ला छ । यदी उनी सर्वाेच्चको ढोकामा न्याय माग्न पुगेको खण्डमा उनी सजिलै पुनर्बहाली हुन सक्छन् । किनकी उनीमाथि आरोप मात्रै लागेको छ । उनीमाथि लागेको आरोप प्रमाणित गर्न स्वयम् गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रशाषनलाई हम्मेहम्मे पर्नसक्छ ।
यदी उनी सर्वाेच्चबाट न्याय पाएर पुनर्वहाली भएको अवस्थामा फेरि प्रहरी संगठनमै बसेर काम गर्नु स्वयम् उनकै लागि लज्जाको विषय बन्नसक्छ । अब उनले आफ्नो २५ वर्षे लामो सेवा गर्दाको इज्जतलाई जोगाउनका लागि मात्रै सर्वाेच्चको ढोकामा पुग्ने र त्यसपछि राजीनामा दिएर घर बस्नु उनका लागि उत्तम हुनसक्छ ।
अन्यको हकमा मौन किन ?
निर्मला पन्तको हत्यापछि अनुसनधानका लागि भनेर त्यतिबेलै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी ज्ञानबहादुर सेट्टी, इन्स्पेक्टर एकेन्द्र खड्का र वडा प्रहरी कार्यालयका इन्चार्ज इन्स्पेक्टर जगदीश भट्टसहित चार जना सइहरु रामसिंह धामी, अरसिंह धामी, बासुदेव वस्ती र देवबहादुर कुँवर खटिएका थिए ।
त्यति मात्रै होइन, सिआइवीका डिएसपी अंगुर जिसीको टोली पनि सो घटनाको अनुसनधानमा खटिएका थिए । घटना स्थलमा निर्मलाको सुरुवाल धोइएको थियो, जुन काम महिला प्रहरी जवान चाँदनी साउँथले गरेकी थिइन् ।
अहिले यिनीहरुको हकमा भने केही कुरा बोलिएको छैन । आखिर किन त ? के विष्ट र भट्टलाई बर्खास्त गरेर केही व्यक्तिले आफ्नो राजनीतिलाई जोगाउन त खोजिरहेका छैनन् ? यदी विष्टले बुझाएको स्पष्टीकरणलाई आधार मान्ने र विश्वास गर्ने हो भने निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या प्रकरण राजनीतिकसँग जोडिएको छ ।
यदी त्यसो हो भने के निर्मला पन्तले न्याय पाउँछिन् त ? बर्खास्तमा परेका एसपीले भनिरहेका छन्, ‘अब म मुख खोल्छु’ भनेर । कतै उनले त्यसरी भनिरहनुको पछाडी कुनै कारण त लुकेको छैन ? कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्ने गर्थे, ‘मैले दरवार हत्या काण्डको मुख खोल्नु नपरोस् ।’
कोइरालाको यस्तो भनाईले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र सत्तामा हुँदा झुक्ने गर्थे । कतै विष्टको भनाई पनि त्यस्तै त होइन ? सोचनीय छ । जे भए पनि निर्मला पन्तका हत्यारालाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ । तर, वास्तविक अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने वहानमा निर्दाेशले दुःख चाँही पाउनु हुँदैन ।
कोरोना संक्रमित नर्स भन्छिन्, म संक्रमणलाई जितेर पुनः ड्युटी जान आतुर छु
मेरो घर मोरङको विराटचोक हो । १० वर्ष भन्दा बढी भयो धनकुटा जिल्ला अस्पतालमा काम गर्न थालेको । स्टा...
मेरो प्यारो दाई,हजुरले हामीलाई छोडेर गएको पनि १ बर्ष भैसक्यो । दाई हजुरको आत्माले शान्ति पाओस् । ...
आपत् कालका यी साथी, जो संक्रमणको बिना डर कोठा–कोठामा पुगेर सहयोग गर्छन्
फिलाडेल्फिया (अमेरिका) । गत मार्च महिनाको दोस्रो सातासम्म न्युयोर्क शहरमा चिसो घटेको थिएन । हिउँ ...
गाँजा-भाङ खुल्ला गर्न बझाङका सांसद सिंह यसरी संसदमै डुक्रिएपछि... भिडियोसहित
काठमाडौं । पटकपटक विवादमा आइरहने सांसद हुन् भैरवबहादुर सिंह । उनी कहिले संसद बैठकमै निदाइरहेका हु...
डा. रुना झा भन्छिन्, म मेरो छोरीलाई अँगालो हाल्न चाहान्छु
हाम्रो लागि यो सबै त्यतिबेला देखि सुरू भयो, जब एक सय ७५ जना नेपाली विद्यार्थीलाई चीनको वुहानबाट न...
एमसीसी परियोजनामा नेपालले लेखा परीक्षण नै गर्न नपाउने पनि हुन्छ र ?
प्रस्तुत विषयका कतिपय विश्लेषण र निष्कर्षहरूलगायत प्रश्नहरूमा मेरा आफ्ना पृथक बुझाइ, अध्ययन र मान...